Kadib Goolkiisii Xalay Karim Benzema Oo Booska 7-aad Kasoo Galay Ciyaartoyda Ugu Goolasha Badan Koobka Horyaalada Yurub - iftineducation.com
iftineducation.com – Goolkii guusha oo uu ka dhaliyay Karim Benzema kooxda Sporting Lisbon ayaa u sahlay inuu ku talaabsado rikoor dhanka gooldhalinta Champions Leauge-ga ah isagoo noqday xiddiga 7-aad ee ugu goolasha badan tartankaan taariikhda, wuxuuna ka sara maray halyeeygii hore xulka Portugal Eusebio ee dhawaan geeriyooday.
Benzema oo 28-jir ah ayaa waqti dambe dhaliyay goolka guusha Madrid xilli Adrien Silva uu barbareeyay gool uu ciyaarta ku daah furay Raphael Varane.
Xidigaan reer France ayaa haatan dhaliyay 48-gool kadib 87-kulan oo uu kasoo muuqday Champions League-ga, wuxuuna barbaro la yahay Andriy Shevchenko iyo Zlatan Ibrahimovic.
Benzema booska 7-aad ayuu ku jiraa hadii dhamaan ciyaartoyda laga hadlo, balse inta aan wali kabaha siibin marka la eego wuxuu ku jiraa booska 4-aad kaliya Messi iyo Ronaldo ayaa ka sareeya, halka Zlatan ay wadaagaan.
Si kastaba guud ahaan taariikhda tartanka haatan wuxuu 1-gool u jiraa kaliya halyeeygii hore Madrid Alfredo Di Stefano sidoo kalana wuxuu laba gool u jiraa halyeeygii hore Arsenal Thierry Henry kaas oo ka mid ah xidigahii ugu xooganaa ee soo mara taariikhda tartankaan.
Halka ugu sareysa liiskaan waxaa fadhiya Cristiano Ronaldo oo dhaliyay 95-gool, halka Messi uu yahay booska 2-aad isagoo dhalayay 90-gool, balse marka ay noqoto in la qiimeeyo kulamada iyo goolasha Messi ayaa mudnaanta lahaanaya.
Raul Gonzales ayaa dhameystiraya sadexda ugu sareysa madama uu 71-gool dhaliyay, halka Ruud Van Nistelrooy uu yahay shaqsiga afaraad isagoo dhaliyay 56-gool.
Gabar dhimatay ayaa ku guulaysatay in maydkeeda la kaydiyo si ay u soo noolaato jaahilnimada gaalada kkkkk